ओल्गा Steshkina ब्लग ओल्गा Steshkina ब्लग
ओल्गा Steshkina ब्लग
हामी गणना गर्दछौं
सबै भुटेको खानु किन नराम्रो हुन्छ ? सबै भुटेको खानु किन नराम्रो हुन्छ ? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub भुटेको मासु खानु किन खराब ? सबैभन्दा राम्रोसँग स्थापित चिन्ता भनेको भुटेको मासु हो। चारकोल सहित फ्राइ गर्दा, यौगिकहरू बनाइन्छ, जुन उच्च मात्रामा ... पढ्नुहोस्
तपाईलाई गनचे किन चाहिन्छ? तपाईलाई गनचे किन चाहिन्छ? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub गणचेंलाई किन स्थिर गर्ने ? यदि स्तरीकृत गनाचेलाई स्थिर हुन अनुमति दिइयो भने, त्यसमा चिल्लो बनावट हुँदैन, तर बोसोको अपर्याप्त फैलावटको कारण दानेदार हुन्छ (बोसोका कणहरू धेरै छन् ... पढ्नुहोस्
प्रश्न: तपाईंले इस्टर २०२१ कहिले बेक गर्नुपर्छ? प्रश्न: तपाईंले इस्टर २०२१ कहिले बेक गर्नुपर्छ? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub तपाईंले इस्टर कहिले पकाउनु पर्छ? परम्परा अनुसार बुधबार, मौण्डी बिहीबार र शनिबार पश्ची पकाउने चलन छ । यदि बुधवार बेक गरिएको इस्टर केक छुट्टी द्वारा आफ्नो ताजगी गुमाउन प्रबन्ध गर्नुहोस् ... पढ्नुहोस्
उत्तम जवाफ: अण्डा फ्राइ गर्न कति डिग्री लाग्छ? उत्तम जवाफ: अण्डा फ्राइ गर्न कति डिग्री लाग्छ? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub अण्डालाई कति समयसम्म फ्राइ गर्नुपर्छ? तातो प्यानमा अण्डा हाल्नुहोस् (प्लेटलाई प्यानको सतहको नजिक राख्नुहोस्)। उच्च गर्मीमा 1 मिनेटको लागि अण्डा फ्राइ गर्नुहोस्। त्यसपछि आगो... पढ्नुहोस्
के मैले रोटीमा अण्डा थप्नु पर्छ? के मैले रोटीमा अण्डा थप्नु पर्छ? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub खमीर आटामा अण्डाहरू केका लागि हुन्? प्रोटिन र भिटामिनको साथ आटालाई समृद्ध बनाउन अण्डाहरू थपिन्छन्; बेक्ड सामानहरू स्वादिष्ट र स्वस्थ हुन्छन्। ताकि पाई र बन्स नहोस् ... पढ्नुहोस्
तपाईंको प्रश्न: बाल्सामिक सस कसरी भण्डारण गर्ने? तपाईंको प्रश्न: बाल्सामिक सस कसरी भण्डारण गर्ने? 2021-10-23 19:01:04	Питание ओल्गा Sologub Balsamic क्रीम कसरी भण्डारण गर्ने? -5'C देखि + 30'C सम्म र 75% को सापेक्ष आर्द्रतामा भण्डार गर्नुहोस्। बोतल खोलिसकेपछि फ्रिजमा राख्नुहोस्। बाल्सामिक भिनेगर कसरी भण्डार गर्ने ... पढ्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो व्यंजनहरु
ग्रील्ड पोर्क रिब्स
नमस्कार, मेरो प्रिय पाक विशेषज्ञहरु। के तपाइँ पसलहरु ठीक संग मसालेदार र ग्रील्ड वा ओवन मा पकाएको मनपर्छ? मसँग एउटा मात्र छ ... पढ्नुहोस्
कसरी teriyaki marinade मा ग्रील्ड पोर्क पसली पकाउने - फोटो संग कदम नुस्खा द्वारा कदम 2017-11-13 12:07:25 व्यञ्जनहरू
ओवन मा पफ पेस्ट्री मा आमलेट कसरी नाश्ता को लागी ओवन मा पफ पेस्ट्री मा एक मूल आमलेट पकाउने - चरण नुस्खा द्वारा एक कदम 2017-09-28 11:53:16 व्यञ्जनहरू
अभिवादन, मेरो अद्भुत gourmets। मलाई भन्नुहोस्, के तपाइँ खाना बनाउन को लागी सजीलो मनपर्छ? मँ छिटो खाना पकाउन को लागी यस्तो माया प्रकट भएको थियो जब मेरो छोरा हिड्न थाले। पढ्नुहोस्
सुन्तला र नींबू संग चिकन जांघहरु कसरी ओवन मा सुन्तला र नींबू संग चिकन जांघहरु पकाउन को लागी - एक तस्वीर संग एक कदम नुस्खा द्वारा कदम 2017-09-15 12:08:35 व्यञ्जनहरू
अभिवादन, उपहार र व्यञ्जनहरु को प्रेमीहरु। मलाई लाग्छ कि तपाइँ इन्कार गर्नुहुन्न कि चरा फल र जामुन संग राम्रो संग जान्छ। ठीक छ, उदाहरण को लागी, एक उत्सव भोज को हस्ताक्षर पकवान ... पढ्नुहोस्
कसरी सही ratatouille पकाउने कसरी सही तरिकाले ratatouille पकाउने-मुख बाट पानी फोटो संग एक कदम द्वारा कदम क्लासिक नुस्खा 2017-09-11 11:57:48 व्यञ्जनहरू
नमस्कार मेरो प्यारो शेफ। भर्खरै मैले कार्टुन "Ratatouille" हेरे। एक राम्रो कथा कि तपाइँ जे चाहनुहुन्छ साँचो हुन सक्छ यदि तपाइँ हार मान्नुहुन्न। एउटा सपना छ -… पढ्नुहोस्
चीजको साथ आलु क्यासरोल पनीर संग एक स्वादिष्ट आलु casserole पकाउने - एक फोटो संग कदम नुस्खा द्वारा एक कदम 2017-09-04 12:01:10 व्यञ्जनहरू
नमस्कार, मेरो प्रिय पाक विशेषज्ञहरु। मैले देखेको छु कि मेरा धेरै साथीहरु दही पाई संग casserole सम्बद्ध। सायद किनभने पनीर पनीर casseroles आत्मा मा डुब्यो, जो ... पढ्नुहोस्
एक महिना मा TOP-5
एक प्यान मा पकाएको गोभी
इलेक्ट्रिक वाफल फलाममा चीज वाफलहरू - फोटोको साथ चरण-दर-चरण नुस्खा
सरल चिकन मटर सूप - पाक नुस्खा
द्रुत अचार गोभी
पनीर डोनट्स - फोटो संग कदम व्यञ्जनहरु द्वारा सजिलो कदम
ब्लेंडरमा के पकाउने?
आज भान्छा मा तपाइँ उपयोगी उपकरण को एक गुच्छा पाउन सक्नुहुन्छ।
Ducan को आहार, चरण2"क्रूज"
Dukan को आहार2चरण - "वैकल्पिक" चरण को सार, ...
आहार माइनस 60 - हप्ता को लागी मेनु
वजन कम गर्न को लागी एक तरीका हो कि तपाइँ भोकै छैन। आहार माइनस 60 ...
Dukan आहार - चरणहरु र मेनू
Dukan आहार को सार के हो, जो ...
विश्व मा प्रसिद्ध कच्चा foodists
संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध कच्चा foodists उनीहरुको आफ्नो छाप साझा ...
पोषण को बारे मा अधिक
प्रश्न: तपाईंले इस्टर २०२१ कहिले बेक गर्नुपर्छ? प्रश्न: तपाईंले इस्टर २०२१ कहिले बेक गर्नुपर्छ? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub तपाईंले इस्टर कहिले पकाउनु पर्छ? परम्परा अनुसार बुधबार, मौण्डी बिहीबार र शनिबार पश्ची पकाउने चलन छ । यदि बुधवार बेक गरिएको इस्टर केक छुट्टी द्वारा आफ्नो ताजगी गुमाउन प्रबन्ध गर्नुहोस् ... पढ्नुहोस्
तपाईंको प्रश्न: बाल्सामिक सस कसरी भण्डारण गर्ने? तपाईंको प्रश्न: बाल्सामिक सस कसरी भण्डारण गर्ने? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub Balsamic क्रीम कसरी भण्डारण गर्ने? -5'C देखि + 30'C सम्म र 75% को सापेक्ष आर्द्रतामा भण्डार गर्नुहोस्। बोतल खोलिसकेपछि फ्रिजमा राख्नुहोस्। बाल्सामिक भिनेगर कसरी भण्डार गर्ने ... पढ्नुहोस्
तपाईलाई गनचे किन चाहिन्छ? तपाईलाई गनचे किन चाहिन्छ? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub गणचेंलाई किन स्थिर गर्ने ? यदि स्तरीकृत गनाचेलाई स्थिर हुन अनुमति दिइयो भने, त्यसमा चिल्लो बनावट हुँदैन, तर बोसोको अपर्याप्त फैलावटको कारण दानेदार हुन्छ (बोसोका कणहरू धेरै छन् ... पढ्नुहोस्
उत्तम जवाफ: अण्डा फ्राइ गर्न कति डिग्री लाग्छ? उत्तम जवाफ: अण्डा फ्राइ गर्न कति डिग्री लाग्छ? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub अण्डालाई कति समयसम्म फ्राइ गर्नुपर्छ? तातो प्यानमा अण्डा हाल्नुहोस् (प्लेटलाई प्यानको सतहको नजिक राख्नुहोस्)। उच्च गर्मीमा 1 मिनेटको लागि अण्डा फ्राइ गर्नुहोस्। त्यसपछि आगो... पढ्नुहोस्
सबै भुटेको खानु किन नराम्रो हुन्छ ? सबै भुटेको खानु किन नराम्रो हुन्छ ? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub भुटेको मासु खानु किन खराब ? सबैभन्दा राम्रोसँग स्थापित चिन्ता भनेको भुटेको मासु हो। चारकोल सहित फ्राइ गर्दा, यौगिकहरू बनाइन्छ, जुन उच्च मात्रामा ... पढ्नुहोस्
के मैले रोटीमा अण्डा थप्नु पर्छ? के मैले रोटीमा अण्डा थप्नु पर्छ? 2021-10-23 19:01:04 Питание ओल्गा Sologub खमीर आटामा अण्डाहरू केका लागि हुन्? प्रोटिन र भिटामिनको साथ आटालाई समृद्ध बनाउन अण्डाहरू थपिन्छन्; बेक्ड सामानहरू स्वादिष्ट र स्वस्थ हुन्छन्। ताकि पाई र बन्स नहोस् ... पढ्नुहोस्
आहार को बारे मा अधिक
सबै कुरा तपाइँ कहिल्यै Maggi आहार को बारे मा सोध्न चाहानुहुन्छ सबै तपाइँ कहिल्यै Maggi आहार को बारे मा सोध्न चाहानुहुन्छ - सबैभन्दा प्राय सोधिने प्रश्नहरुको उत्तर 2018-10-23 14:30:07 आहार ओल्गा Sologub Maggi आहार को बारीकियों को बारे मा सबै भन्दा साधारण प्रश्नहरु को एक संग्रह। तपाइँ कति पटक दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, तौल बन्द भएको छ भने के गर्ने, शासन को उल्ल is्घन भए के गर्ने, कुन भाग को आकार, कब्जियत छ भने के गर्ने। अनुमति दिइएको तरकारी र फलहरु, तपाइँ कसरी अण्डा प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, के माछा खान को लागी र रक्सी र शराब को अनुमति छ। पढ्नुहोस्
के खानाहरू वजन घटाउन योगदान कुन खानाहरु लाई चयापचय को गति, बोसो जलाउन र तौल घटाउन को लागी मद्दत गर्दछ? 2017-12-17 21:18:32 आहार ओल्गा Sologub क्रम मा अतिरिक्त तौल छिटो टाढा जान को लागी, तपाइँ खानाहरु कि मानव शरीर मा चयापचय को गति लाई खाने को जरूरत छ। कसले यो संग मद्दत गर्नेछ? तपाइँ यस लेखमा सबै भन्दा राम्रो को एक सूची पाउन सक्नुहुन्छ। कम क्यालोरी सूप, अनाज र तरकारीहरु छिटो वजन गुमाउन को लागी राम्रो छ। मसाले को रूप मा जडी बूटीहरु लाई खाना को विविधता - उनीहरु बोसो जलाउँछन् र वजन घटाने लाई बढावा दिन्छन्, विशेष गरी पेट र छेउमा। पढ्नुहोस्
अचार अदरक संग तौल घटाउनुहोस् कसरी ठीक तौल घटाउने: अचार अदरक वजन घटाने को लागी राम्रो छ? 2017-11-01 11:59:14 आहार ओल्गा Sologub अधिक वजन संग लड्न थकित हुनुहुन्छ? वजन घटाने को लागी अचार अदरक कोसिस गर्नुहोस्। यस लेखमा, हामी कसरी उपयोगी अदुवा लिन को लागी उपयोगी सुझावहरु स collected्कलन गरेका छौं, कति ग्राम प्रति दिन त्यहाँ छन्, कति फ्याँकिन्छन्, यदि सही तरिकाले प्रयोग गरीन्छ। साथै घर मा अचार अदरक को लागी एक उपयोगी नुस्खा, लाभ र उत्पादन को हानि। पढ्नुहोस्
तपाइँलाई तौल घटाउन के खान आवश्यक छ उचित पोषण र व्यायाम स्लिम हुन को लागी महत्वपूर्ण छ। तौल घटाउन के खाने? 2017-10-27 11:44:46 आहार ओल्गा Sologub अधिक तौल आधुनिक समाज मा एक लामो समय देखि चलेको समस्या हो। यसको बिरूद्ध लडाई मा, व्यायाम र क्यालोरी गणना बचाव को लागी आउँछ। यस लेख बाट, तपाइँ के बारे मा जान्न को लागी तपाइँ वजन कम गर्न को लागी खाना को आवश्यकता छ, के खाना छनौट गर्न को लागी, र त्यो राम्रो नतिजा को लागी तपाइँ नियमित रूप मा व्यायाम गर्न को लागी, धेरै हिड्ने, र राम्रो संग दौडनु पर्छ। पढ्नुहोस्
वजन घटाने को लागी दोस्रो नाश्ता के "दोस्रो नाश्ता" वजन घटाने को लागी गोप्य हतियार हो? 2017-10-14 11:57:27 आहार ओल्गा Sologub धेरै मानिसहरु तर्क गर्छन् कि एक हार्दिक नाश्ता एक सफल दिन को लागी महत्वपूर्ण छ। जे होस्, यो छैन। यो सब भन्दा राम्रो छ आधा मा तपाइँको बिहान को खाना विभाजित। यस तरीकाले तपाइँ अधिक मूल्य पाउनुहुन्छ। पढ्नुहोस्
के बारम्बार तौल धम्की छ लगातार तौल को जोखिम के हो र कसरी सही नियमितता पाउन को लागी 2017-10-12 11:58:59 आहार ओल्गा Sologub धेरै मानिसहरु आफ्नो तौल हेर्छन्। तर केहि मानिसहरु यो संग धेरै पागल छन्। कसरी सुनौलो मतलब पत्ता लगाउन? यो यति सजीलो मा देखी हताश प्राप्त गर्न को लागी हो पढ्नुहोस्
स्लिमनेस को बारे मा अधिक
Kegel महिलाहरु को लागी व्यायाम कसरी राम्ररी घर मा महिलाहरु को लागी Kegel व्यायाम प्रदर्शन गर्ने? 2018-04-02 11:56:23 कोमलता ओल्गा Sologub Wumbling वा योनि Kegel व्यायाम धेरै पुरस्कृत कसरत हो। लेख बाट तपाइँ यो के हो जान्न को लागी, कसरी घर मा महिलाहरु को लागी सही तरिकाले यस्तो जिमनास्टिक गर्न को लागी, त्यहाँ बवासीर र cystitis को लागी कुनै मतभेद छ, यो मासिक धर्म को समयमा गर्न सम्भव छ। साथसाथै एक कदम द्वारा कदम शुरुवात को लागी पाठ र बल संग अभ्यास। पढ्नुहोस्
Kegel गर्भवती महिलाहरु को लागी व्यायाम कसरी ठीक तरिकाले गर्भवती महिलाहरु को लागी Kegel अभ्यास गर्न को लागी र त्यहाँ उनीहरु को लागी कुनै contraindications छन्? 2018-03-30 11:56:22 कोमलता ओल्गा Sologub Kegel व्यायाम को एक कसरत ४० हप्ता सम्म गर्भवती महिलाहरु को लागी लाभदायक छ। यो पहिलो ट्रिमिस्टर मा अभ्यास गर्न शुरू गर्न को लागी राम्रो छ, तर लाभहरु दोस्रो र तेस्रो मा ध्यान देने योग्य हुनेछ। लेख मा तपाइँ कसरी घर, समीक्षा र contraindications मा जिमनास्टिक गर्न को लागी जानकारी पाउनुहुनेछ। पढ्नुहोस्
Kegel बल जिम्नास्टिक Kegel बल संग अंतरंग जिमनास्टिक्स: यो के हो र कसरी तिनीहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने 2018-03-28 12:14:18 कोमलता ओल्गा Sologub महिलाहरु को लागी योनि मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउन को लागी घर मा सम्भव छ। यस को लागी तपाइँ अण्डा वा Kegel बलहरु को जरूरत छ। यस्तो सिम्युलेटर कसरी प्रयोग गर्ने? आउनुहोस् कि उनीहरु के हुन्, उनीहरु के का लागी हुन् र कसरी अभ्यास गर्ने भनेर थाहा पाउनुहोस्। यस लेखमा, तपाइँ कसरी बलहरु को उपयोग गर्न को लागी निर्देशनहरु पाउनुहुनेछ, कसरी शुरुआती को लागी आकार छनौट गर्ने बारे मा सुझावहरु, कसरी सम्मिलित गर्ने र उनीहरु कसरी काम गर्छन्। पढ्नुहोस्
सास कसरत 15 मिनेट एक स्लिम शरीर को लागी एक दिन - पेट slimming को लागी सास फेर्ने व्यायाम 2018-03-09 11:58:03 कोमलता ओल्गा Sologub एक दिन को रूप मा थोरै 15 मिनेट को रूप मा व्यायाम राम्रो परिणाम को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ। यो पेट मा तौल घटाउन सास फेर्ने अभ्यास मास्टर गर्न को लागी पर्याप्त छ। यो के हो? लेख मा तपाइँ मरीना Korpan शरीर फ्लेक्स, Strelnikova जिमनास्टिक, jianfei जापानी प्रणाली अनुसार शुरुआती र कक्षाहरु को लागी एक विवरण पाउनुहुनेछ। तपाइँ पनि समीक्षा पढ्न सक्नुहुन्छ र एक भिडियो मात्र 8 मिनेट मा व्यायाम को आधारभूत देखी हेर्न सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस्
पेट स्लिमिंग व्यायाम के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि पेट, पक्षहरु र कूल्हों मा वजन कम गर्न को लागी शारीरिक अभ्यासहरु सबैभन्दा प्रभावकारी छन्? 2018-03-07 11:58:05 कोमलता ओल्गा Sologub व्यायाम मात्र जिम मा गर्न सकिन्छ, तर यो पनि घर मा, एक कुर्सी मा बसेर गर्न सकिन्छ। यस लेख मा, पुरुषहरु र महिलाहरु को लागी प्रभावी workouts चयन गरीन्छ - फिटबल मा, bodyflex सांस जटिल, स्थिर पट्टी र अन्य। पेट र पक्षहरु, जांघहरु, नितम्ब र हतियार slimming को लागी डम्बल व्यायाम। पढ्नुहोस्
Kegel मिसिनहरु के का लागी हुन्? योनि Kegel प्रशिक्षकहरु को लागी के हुन्? सञ्चालन को सिद्धान्त र प्रयोग को लागी निर्देशन 2018-03-06 11:56:56 कोमलता ओल्गा Sologub महिलाहरु को लागी, पेल्विक मांसपेशिहरु लाई बलियो बनाउन Kegel सिमुलेटर को मदद संग सम्भव छ। यो के हो, कसरी बलहरु को उपयोग गर्न को लागी र त्यहाँ कुनै contraindications छन् - यो लेख मा पढ्नुहोस्। साथै डाक्टरहरु को समीक्षा, कसरी छनौट गर्ने र कहाँ यस्तो massagers किन्न को लागी, यो घर मा यो गर्न को लागी सम्भव छ र सबैभन्दा लोकप्रिय मोडेल को वर्णन - जादू Kegel मास्टर र kGoal। पढ्नुहोस्
सौन्दर्य को बारे मा अधिक
अनुहार प्राइमर के हो अनुहार प्राइमर: यो के हो र यो कसरी प्रयोग गर्ने + उत्तम उत्पादनहरु को रेटिंग 2019-01-24 15:59:02 Красота ओल्गा Sologub शुभ दिउँसो, प्रिय ब्लग पाठकहरु! के तपाइँलाई थाहा छ अनुहार प्राइमर के हो? जो पेशेवर मेकअप कलाकारहरु को सल्लाह को पालन लामो समय सम्म आफ्नो कस्मेटिक झोला मा यो उत्पादन समावेश गरीएको छ। र छैन ... पढ्नुहोस्
अनुहार को लागी hyaluronic एसिड को लाभ अनुहार को लागी hyaluronic एसिड को लाभ के हो: cosmetology र घर मा प्रयोग 2018-08-29 09:21:57 Красота ओल्गा Sologub अनुहार को लागी hyaluronic एसिड के हो? चिनौं किन hyaluronic आधारित fillers आवश्यक छ, कसरी क्रीम र घर मा सीरम को उपयोग गर्न को लागी, इंजेक्शन को उपयोग, mesotherapy र झुर्रियों को लागी biorevitalization, ओठ र cosmetology मा nasolabial तहहरु को लागी। गर्भावस्था को समयमा Contraindications र यो गर्मी मा चुम्बन सम्भव छ। प्रक्रिया को समीक्षा र फोटोहरु पहिले र पछि। पढ्नुहोस्
अनुहार को लागी ओजोन थेरापी के हो अनुहार को लागी ओजोन थेरापी के हो र कति छाला उपचार को एक पाठ्यक्रम को लागत छ? 2018-08-24 14:21:54 Красота ओल्गा Sologub छाला मा ओजोन को लाभदायक प्रभाव लामो कस्मेटोलोजी मा प्रयोग गरीएको छ। यस लेख बाट तपाइँ जान्न सक्नुहुन्छ कि ओजोन थेरापी एक तस्वीर को साथ एक अनुहार को लागी पहिले र पछि, यसको मूल्य, यो कसरी मुँहासे, मुँहासे, rosacea को उपचार मा मद्दत गर्दछ, र अनुहार र घाँटी को अंडाकार को लागी। के contraindications, परिणाम र जटिलताहरु छन्। के यो घर मा र गर्भावस्था को समयमा यो प्रयोग गर्न सम्भव छ, कती प्रक्रिया को एक पाठ्यक्रम लागत छ? पढ्नुहोस्
अनुहार र शरीर को लागी ब्रोंजर अनुहार र शरीर को लागी एक bronzer के हो: यो के हो र यसको आवेदन को लागी एक चरण-दर-चरण योजना 2018-08-20 14:05:12 Красота ओल्गा Sologub उज्यालो छाला हरेक केटी को सपना हो। यस लेख बाट तपाइँ अनुहार र शरीर को लागी एक bronzer के हो, यो के को लागी, कसरी लागू गर्ने र एक हाइलाइटर संग सही ढंगले प्रयोग गर्ने को तस्वीर मा एक चरण-दर-चरण आरेख, कसरी हल्का छाला को लागी एक उत्पादन छनौट गर्न को लागी जान्नेछन्। , जो एक किन्नु राम्रो छ - पाउडर वा तरल, फोटोहरु संग समीक्षाहरु पहिले र पछि ब्रान्डहरु Clarence, म्याक, डायर, Letual र अन्य को बारे मा पछि। पढ्नुहोस्
Pores संकीर्ण को लागी मतलब अनुहार मा pores संकीर्ण गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो कस्मेटिक्स र लोक उपचार को समीक्षा 2018-04-01 12:17:03 Красота ओल्गा Sologub जब अनुहार मा pores संकीर्ण को लागी सबै भन्दा राम्रो उपाय छनौट, तपाइँलाई थाहा छ कि तपाइँ प्रभावकारी औषधि तयारी किन्न सक्नुहुन्छ वा घर मा एक राम्रो लोक मास्क तैयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्रीम, कस्मेटिक माटो वा एस्पिरिन, आलु र कागती, वा मह संग मास्क हुन सक्छ। लेख मा अधिक पढ्नुहोस्, जहाँ तपाइँ कस्मेटिक्स को लागी समीक्षा र मूल्यहरु पाउनुहुनेछ। पढ्नुहोस्
अनुहार हाइलाइटर के हो अनुहार हाइलाइटर के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने: कसरी एक रंग छनौट गर्न र यसलाई सही तरिकाले लागू गर्न सिक्दै 2018-03-31 12:18:51 Красота ओल्गा Sologub तपाइँ एक हाइलाइटर बिना सही मेकअप प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो के हो र कसरी यो सही तरिकाले प्रयोग गर्न को लागी थाहा पाउनुहोस्! लेख मा तपाइँ कसरी एक गोल अनुहार मा लागू गर्न को लागी एक चरण-दर-चरण योजना पाउनुहुनेछ, जसको समीक्षा एक एक अनलाइन स्टोर मा किन्न को लागी राम्रो छ, राम्रो हाइलाइटर्स को मूल्यहरु र मूल्या ,्कन, आवेदन अघि र पछि फोटो, मा सुझावहरु। इच्छित छाया कसरी छनौट गर्ने। पढ्नुहोस्
नमस्ते, मेरो नाम ओल्गा हो। सुन्दरता र स्वास्थ्य को लागी स्वस्थ व्यञ्जनहरु खोज्दै हुनुहुन्छ? तब मेरो ब्लग मा स्वागत छ। मेरो बारेमा थप
© २०१-1983-२०२० ओल्गा Steshkina ब्लग सामग्री को प्रतिलिपि मात्र प्रोत्साहित गरिन्छ यदि त्यहाँ एक सक्रिय लि is्क छ takioki.ru
गोपनीयता सेटिंग्स परिवर्तन गर्नुहोस्